Breaking news: Afaan jawweeti baanee afaan naachaa buune!! - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosBreaking news: Afaan jawweeti baanee afaan naachaa buune!!
Afaan jawweeti baanee afaan naachaa buune!!
Breaking news: Yunivarsiitii #Walloo keessaatti ilmaan Oromoo lakkoofsaan bira ga’amuu hindandeenye humna warra Amaaraa dallaa cabsee seeneefi barattoota meeshaa nama waraanu galfataniin miidhamanii jiru. Baayyeen isaanii AMbulaansiidhaan mana yaalaatti guuramaniiru. Kan akka malee miidhames hedduudha. Yeroo ammaa kana lafa buuteensaanii kan dhabame kan doormiidhaa kaachifamanii akka bineensaatti reebamaa jiranis hedduudha. Ijoollee dubaraarrattis aggaammii ciigaasisaatu raawwateera. yaa Oromoo, ilmaankee naannoo Amaaraati qe’eetti dachaafadhu. Teessee #Reeffa sharaan xaxamee siif dhufu simachuurra barumsarraa hafee lubbuun siif jiraachuutu caala. Milishoonni Amaaraa utuu hinhafiin ijoollee Amaaraa gargaaranii Oromoo caccabsaa jiru.
Naannoo Amaaraa keessatti joolleen akka mooraa barnootaatii hin baane Liyyuu polisiitiin marfamanii eegaamaa jiru jechuun oduu yaaddessaa dha. Joolleen kun nagaan gara Oromiyaatti akka hin deebines dhorkamaa jiru jechuu dha. Liyyuu polis jechuun ammoo akkuma beeknu humna jibba Oromoo waga’amaa leenjifamee dha. Humna Asaamminoo Tsiggee ti. Humni kun bahee humni federaalaa akka mooraa eegu waywaannee mootummaan nu dhagahu hin argamne. Irra deebinee jenna, miidhaa joollee keenya barnootaaf manaa baatee naannoo Amaaraa jirtuuf kallattiin kan itti gaafatamu mootummaa OPDO ti.
Joollee keenya waaqni haa tiksu!
“Ferhan keenya dafii sagalee nuuf tahi an yeroo ammaa kana wollo university dessie compus keessaan jira haallii as jiru hedduu nu sodaachiisaa jira lubbuu keenyaa wabij tokkollee hin qabnu kunoo liyyuu hayliin naannoo amhara nu marsittee ija diimtuu nu argisiisaa jirtii lola galgala keessaa sa’aati 12:45tti eegaleen ijoolleen hanga nama 4 tahan refer barreeffameefi kara hospitala geffaman ijoolleen hammi tokko mesgidatti beqatan kuwwan immoo doormitti dararaa hamaa keessa jiru yaa ferhan kiyya dafii naaf maxxansii sagalee naaf tahi”
Har’a Abbaan Alangaa federaalaa qorannaa yaalii fonqolchaa naannoo Amaaraattii Asaaminoo Tsiggee geggeesse irratti godhame ifa gidheera. Ibsa kana keessaa waa heddutu hafe. Fakkeenyaaf:
1) Asaaminoon humna addaa 37,000 baajata mootummaa naannichaa biliyoona 1.8 itti baasee leenjise. Kana keessaa nama 5,000 leenjisee hidhachiisee Oromiyaatti bobbaase. Gaafa inni fonqolcha yaale sanuu nama 1000tu mooraa leenjii naannoo Dasee jirtu keessa ture. Warra leenjisee Oromiyaatti erge keessaa dhibbi muraasi gaafa yaali fonqolchaa san poolisii Orimiyaan qabamnis akka gadi lakkifaman godhame. Jara leenji’ee gale kanatu jeequmsa tibbana Oromiyaatti geggeeffammeen Adamaafi magaalota birootti nama fixe. Kana mootummaan naannoos kan federaalaas beeka. Iccitii miti jechuufi.
2) Asaaminoon waraana leenjise san ummata Oromoo Walloo irratti duulchisee ummanni akka ofirraa ittise ni yaadattu. Sababa lola saniitin nama 49 hidhame. 48 Oromoo, hoggganoota godinachaafi magaalaa dabalatee. Asaaminoon lola Oromoofi Gumuuz irratti godhame san banuun erga inni du’ee ifatti himamee balaaleffatamus, Oromoonni hidhaman sun ammas hin baane. Ammas hidhaa naannoo Amaaraa keessa jiru. Yakki hojjatan jedhanu federaalaa waan laallatuuf dabarfamnii humna federaalaaf akka laataman ajajni bahus, naannoon Amaaraa no dide. Kanaafu ammas humna Asaaminoon leenjisee biraa deeme kaanaan eeggamu. Yeroo kamittuu balaan irra gahuu danda’a.
3) Asaaminoon maallaqa baajata mootummaa biliyoona 1.8 leenjii waraanaaf fayyadameen dabalatee dureeyyonni beekamoon maallaqa guddaa walitti buusanii hidhannoo biyya keessatti hin argamne bitaafii turan. Daldala meeshaa waraanaa Suudanii seenus waliin dalagaa turan. Daldaltoonni kun ifatti beekamu. Hin waakkatan. Torban darbeeyyuu walgahii wahii irratti gaafatamanii amananii dhaadatan. Meeshaa waraanaa Oromiyaa guutaa jirus isaantu galcha. Yakka kanaaf adabamuun hafeet lafti babal’aan magaalotaa laatamaaf. Koontiraannii mootummaa kennamaaf.
Afaan jawweeti baanee afaan naachaa buune.
Qabsoo nama tokko irratti xiyyeefatame godhamu furmaata hin qabu. Fakkeenaaf bulchiinsa hayilamariyaam irraa gara dr abiyitti gaafa jijiramu namoonni hedduun injifannoodha . Bilisoomnee jirra. Kanaan boodas qabsoon hin jiru jechuun baatiiwwan lamaaf akka gaariitti dhiichifamaa ture.
Garuu immoo EPDRF nama tokko buusee nama biraa bakka buufate malee ce’umsaa yookin bilisummaa hin turre.
Ammallee nuti kaanee nama tokkoon mormina fakkeenyaaf #taayyee_danda‘aan yookin dr abiyyin mormina. Bakka taayyee danda’aa yoo balaachoo kaayan , yookin bakka dr abiy yoo alamuu simee kaayan gaafiin keenya deebii argate jechuudhaa…….????
Moo bilisoomnee jirra jedhamaa…?
Haala kanaan namoota dhuunfaa tokko tokko qabannee morminuufii falmannu ta’e eessaayyuu hin geenyu.
Kanaaf dhaaba nu gabroomse hiddaan buqqisuuf hin qabsoofnu yoo ta’e , warra kaayyoo akkasitiif qabsaahuuf daandii banuun qabsoo guddaadha.
Yunivarsiitii Waldiyaa keessatti marii jolleen tenyaa tasisa turan guyya arra caqasa // Rabbin isan wajin haa jirtu
OMN:GRD: Haala Yunivarsiitii Waldiyaa(Sad 10,2019)
WAASHINGITAN, DIISII —(voaafaanoromoo)– Dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaa keessatti haala nageenyaa yeroo amma jiru kan ilaaleen ministeera saayinsii fi barnoota sadarkaa Olaanaatti Daarekteera komunikeeshinii kan ta’an Obbo Dachaasaa Gurmuu akka jedhantti yaaddoo keessumaa dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaa kanneen Oromiyaa keessaa mudate kana dhabamsisuuf barattoota waliin marii gaggeessuu fi humnootii nageenyaa bobbaasuun itti fufee jira.